Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya shacab oo lagu xasuuqay Degmada Kaxda - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya shacab oo lagu xasuuqay Degmada...
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya shacab oo lagu xasuuqay Degmada Kaxda
Maleeshiyaad hubeysan ayaa xalay fidkii degmaada Kaxda ku xasuuqay dad Shacab ahaa oo fadhiyay Maqaaxi laga cunteeyo. Waxaa halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. Waxaa MOL loo xaqiijiyay in isla goobta falka ka dhacay ay ku dhinteen, sadax qof, halka ay ku dhaawacmeen Shan qof oo kale.
Dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay sheegay in weerarkaas ay geysteen rag ku hubeysan qori AK-47 ah oo watay gaari yar oo nooca raaxada ah, marka ay dilk gaysteena ay halkaa isaga carareen.
Inkastoo aan wali la cadaynin hadana Ehelada dadka xalay la dilay qaarkood ayaa sheegay in dilkaan ay ku tuhunsan yihiin in loogu aar gudayey oday habeen kahor lagu dilay degmadaas, sidoo kalena lagu dhaawacay wiil uu dhalay iyo Haweeney kale.
Previous articleJeppe K.” “Kheyre waxa uu ogolaaday in qaxootiga Somalida dib u soo celino”
Next articleMaamulka Puntland oo meel fagaara ah ku toogtay 5ruux oo lalaxiriirinayo Al-Shabaabnimo